Siyakwamukela ku-KalimbaForum - Inkundla Yezimenywa - Iforamu ye-Kalimba
Zizwe ukhululekile ukuhlola i-KalimbaForum futhi ubone ukuthi abanye abathanda i-Kalimba bathini ngama-Kalimbas.
Izivakashi zingathumela ngokukhululekile kuphela kule nkundla - kwezinye izinkundla udinga i-akhawunti.
Jabulela ukuvakashelwa kwakho!
Isiqalo sesihloko Kubhalwe: 31/01/2021 2:37 pm
Ngisanda kungena njengelunga, ngithumele ukubuza ukuthi ukhona yini owazi amanothi omculo ohlelweni lwezingane olune-kalimba ukuze mina nosana lwami siludlale, bese ngivuselela isiphequluli ukuze sihlole okuthunyelwe futhi sithole isaziso. ethi ngivinjiwe. Noma yimiphi imibono? Angikaze ngithunyelelwe noma yiluphi uhlobo lomlayezo ukuze ngiwuchaze futhi okuxakayo ngithunyelelwe lesi sithangami ngumuntu othi 'inkundla yobungane izokujabulela ukusiza'. Impela edidekile akhiphe kancane.
Kubhalwe: 18/09/2021 12:34 pm
Ubukhulu besayizi wefayela ovunyelwe ngu-10MB
Bhalisela kulesi sihloko
Buka kuqala 0 Izibuyekezo Londoloza Draft Ilondolozwe
Njengamanje ubukela lesi sihloko umvakashi we-1.